NEW version 0.9.9 maka Windows - 💡💻 Iris - Software maka Eye nchedo, Health na Productivity 🛌👀
Iris floss maka Wayland
Buy Ndenye aha
Ịzụta na PayPal
Ịzụta na Debit / Ebe E Si Nweta Kaadị
Ịzụta na Bitcoin
NEW version 0.9.9 maka Windows
Download "Iris-0.9.9-Windows”	Iris-0.9.9.exe
New iteration nke mkpisiaka maka ikikere
Ọ bụghị ihe ọhụrụ dị ka a atụmatụ
Ihe na Iris, New Version, Windows
contact@iristech.co · Usoro na ọnọdụ · kere site Daniel Georgiev.
Mere na Bulgaria
Anyị na-eji kuki iji na-enye gị a mma nchọgharị ahụmahụ, hazie ọdịnaya ma nyochaa saịtị okporo ụzọ. Gụọ banyere otú anyị na-eji kuki na otú i nwere ike ịchịkwa ha site na ịpị "Nzuzo Mmasị". Ọ bụrụ na ị nọgide na-eji saịtị a, ị kwenye anyị ojiji nke kuki.
Nzuzo Mmasị Center
nditịm Dị Mkpa
Mgbe ị gara na ihe ọ bụla website, ọ nwere ike na-echekwa ma ọ bụ inweta ihe ọmụma na ihe nchọgharị gị, ukwuu n'ime n'ụdị kuki. Nke a na ozi pụrụ ịbụ ihe ị, mmasị gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị na-akasị ji ime ka saịtị ọrụ dị ka ị na-atụ anya ya. The ọmụma adịghị abụkarị ịkọwapụta gị ozugbo, ma ọ nwere ike na-enye gị a ọzọ ahaziri web ahụmahụ.
N'ihi na anyị na-asọpụrụ nri gị na nzuzo, ị nwere ike họrọ na-ekwe ka ụfọdụ ụdị nke kuki. Pịa na dị iche iche na udi aga chọpụta ihe na-agbanwe anyị ndabara ntọala. Otú ọ dị, igbochi ụfọdụ ụdị nke kuki ike mmetụta gị ahụmahụ nke saịtị na ọrụ anyị na-enwe na-enye.
Ị na-agụ na kwetara anyị amụma nzuzo.
Kuki ndị dị mkpa maka saịtị na-arụ ọrụ nke ọma.
Ndị a na-enyere anyị akwụ gị ụgwọ na free ojiji nke ngwa na-enye gị a discount ma ọ bụrụ na a kpọrọ gị òkù ka Iris website.
PHPSESSID, òkù, ap_id
Ndị a na-eji soro onye ọrụ na mmekọrịta na ịchọpụta nsogbu. Ndị a na-enyere anyị mma ọrụ anyị site n'inye gbasara nyocha data na otú ọrụ na-eji saịtị a.
BỤGHỊ, nkwenye, 1P_JAR, HERE
Mechie akaụntụ gị?
Akaụntụ gị ga-emechi na niile data ga-apụ kpam kpam na-apụghị gbakee. O doro gị anya?